Family GPS tracker KidsControl k5.2.10 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း k5.2.10 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား လူမႈေရး Family GPS tracker KidsControl
Family GPS tracker KidsControl ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုကို app ကိုသင့်မိသားစုအင်္ဂါဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်မှာခြေရာခံစောင့်ရှောက်။ ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်!
သင့်ရဲ့ဆိတ်သငယ်ရဲ့ GPS စနစ် Smart Watch ချိတ်ဆက်ပါနှင့်သင့်ဆိတဝိုက်ဖြစ်ပျက်နားထောင်ပါ။
သင့်ရဲ့ဆိတ်သငယ်အိမ်, ကျောင်း, ဒါမှမဟုတ်သင်သတ်မှတ်ပါဆိုသောအရပ်တို့ကိုမရောက်လာသည့်အခါ★အလိုအလျောက်သတိပေးချက်လက်ခံ
★ကလေးများထိန်းချုပ်ရေး GPS တည်နေရာကိုပင်မြေအောက်ကားပါကင်အတွက်နေရာချထားနိုင်သည်!
အင်တာနက်ကိုပယ်အခါ geodata ၏အသံဖမ်း - ★ပရီမီယံဗားရှင်းမှာတော့ Blackbox feature ကို enable
★ Connect ကို Wonlex စမတ်ကလေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်မှုပျော်မွေ့။ Q50, Q80, Wokka စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Q50, စမတ်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် Tracker နှင့်အခြားသော: အဆိုပါ app ကို Kid ရဲ့ဂျီပီအက်စ်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မော်ဒယ်များကို support!
★ကလေးများထိန်းချုပ်ရေး GPS စနစ် tracker အသိဉာဏ်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သာတစ်နေ့တာအတွင်းဘက်ထရီ၏ 1-7% ကိုအသုံးပြုသည်
★ကိုသင်မရှိတော့ပါ "သင်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း" ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်စာသားများနှင့်အတူသင့်ကလေးနှောငျ့ယှကျဖို့ရှိသည်
★မိသားစု Locator ကလေးများထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူအန်းဒရွိုက်ဖုန်းများနှင့်အိုင်ဖုန်း Locate
အခမဲ့မိသားစု Locator ကလေးများထိန်းချုပ်ရေးခြေရာခံဆိရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော App ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စမတ် whatches GPS ။
KidsControl GPS စနစ်မိဘအုပ်ထိန်း app ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဖုန်းအသုံးပြုမှုများအတွက် tool ကိုစသင့်ကလေး၏ဖုန်းကိုလှည့်နှင့်တည်နေရာနှင့်လုံခြုံမှုခြေရာခံ။ အဘယ်သူသည်ကပင်သင့်ရဲ့ကလေးတွေနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေခြင်းငှါ, သိတယ်!
သင့်ကလေးကိုတစ်နေရာရာမှာရောက်ရှိလာသောအခါအလိုအလျောက်သတိပေးချက်ရဖို့, ထိုကဲ့သို့သောကျောင်းနှင့်နေအိမ်အဖြစ်နေရာများ (ပထဝီခြံစည်းရိုး), ဖန်တီးပါ။ သင့်ကလေးကဤဒေသများဝင်သို့မဟုတ်အရွက်သည့်အခါ, သင့်ရဲ့ဖုန်းဟာအကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီကိုအဆင့်ကို 15% ကိုအောက်တွင်ကျရောက်သည့်အခါ KidsControl GPS စနစ် tracker တွင်ဤဖုန်းအကြောင်းကိုသတိပေးချက်များပေးပို့, သင်ဖုန်းကိုအားသွင်းဖို့သင့်ကလေးကိုသတိပေးနိုငျသညျ။
ဘက်ထရီနှင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အစီရင်ခံစာဖုန်းက drains ဘယ်လောက်လျင်မြန်စွာ, တရားစွဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အဆက်ပြတ်နေသည့်အခါမည်မျှမကြာခဏသင်ပြသထားတယ်။ သင်သည်သင်၏ကလေးသည်အိပ်ရာသွားနှင့်ဖွင့်လာတဲ့အခါပြောပြရန်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ရက်အဘို့အင်တာနက်အချက်ပြ၏တည်ငြိမ်မှုကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
တိကျသောသြဒီနိတ်ပေး, ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုကို enable လုပ်ထားတဲ့တည်နေရာရှိရမည်။ Wi-Fi ကို 30-100 ပေတိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးပွားစေခြင်းနှင့်အိမ်တွင်းအလုပ်လုပ်တယ် Enabled ။ GPS တည်နေရာသာအိမ်ပြင်, 30-150 ခြေတိကျမှန်ကန်မှုရှိပါတယ်။
GPS စနစ်ခြေရာခံခြင်းနှင့် Wi-Fi ကိုတည်နေရာမရရှိနိုင်ပါပိတ်ထားသို့မဟုတ်မနေကြတဲ့အခါ, KidsControl မိသားစု Locator ဂျီအက်စ်အမ်တာဝါတိုင်၏ပေါင်ကိုသြဒီနိတ်သဖြင့်ဖုန်းရဲ့တည်နေရာကိုဆုံးဖြတ်သည်။
တချို့ကမိဘများကသူတို့ကလေးက app ကိုဖျက်ပစ်စေခြင်းငှါစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ် KidsControl မိသားစု tracker တွင်အသုံးဝင်သည်အဘယ်ကြောင့်ကလေးများရှင်းပြနှင့်သင်အိမ်မှာသင့်ရဲ့သွားရာလမ်းပေါ်တွင်အခါသူတို့ကိုမြင်ပါစေရန်ကူညီပေးသည်။ ပွင့်လင်း၏ဤအဆင့်အထိလည်းသင့်ရဲ့လေးတွေတောင်းရန်မခေါ်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတယ် "သင်သည်အဘယ်မှာရှိ?" သို့မဟုတ် "ဘယ်လိုမကြာမီသင်ဒီမှာမရကြလိမ့်မည်နည်း"
KidsControl တစ်ထောက်လှမ်းရေးသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်စောင့်ကြည့်ဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ပါနှင့် app ကိုအဝေးမှသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်စွာ installed မရနိုင်ပါ။ ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူ join ဖို့ app ကိုမိမိကိုမိမိတပ်ဆင်ရန်နှင့်ဖိတ်ကြားချက်ကိုအသုံးပြုသူထံမှဖိတ်ကြားချက်ကိုကုဒ်ရိုက်ထည့်ဖို့ရှိပါတယ်။
အသုံးပြုသူများအခြို့သောအချိန်များအတွက်တည်နေရာမျှဝေရပ်တန့်သို့မဟုတ်အကောင့်တစ်ခုထဲကနေကနေ log out သို့မဟုတ်လုံးဝ app ကိုဖျက်ပစ်ရန်ထို option ရှိသည်။
ဒီ app အစီအစဉ်များအတွက်မြင်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးတည်းသာအကောငျ့ကိုအတွင်းအပြင်တည်နေရာမျှဝေနိုင်ပါသည်။
SMS ကိုခွင့်ပြုချက် GPS စနစ်စမတ်ကလေးနာရီအထိ setting ဘို့လိုအပ်ပါသည်။
သင် app ကိုဖွင့် setting နှင့်အတူအကူအညီလိုသို့မဟုတ်မေးခွန်းများကို / အကြံပြုချက်များရှိပါကသင် app ထဲမှာအကူအညီအပိုင်းကနေတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် help@kid-control.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့။
ပရီမီယံမှ upgrade နှင့် get:
နေရာများ၏န့်အသတ်အရေအတွက်သည် (သာ2နေရာများအခမဲ့ဗားရှင်းအတွက်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်),
တည်နေရာသမိုင်း၏2ပတ် (အစား2ရက်)
အင်တာနက်ကိုမရရှိနိုင်သည့်အခါ Blackbox ပျံသန်းမှုအသံဖမ်းသင်စံချိန်လမ်းကြောင်းကြကုန်အံ့။
Family GPS tracker KidsControl အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Family GPS tracker KidsControl အား အခ်က္ျပပါ
nakedfaerie စတိုး 320 74.19k
Family GPS tracker KidsControl ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Family GPS tracker KidsControl အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း k5.2.10
ထုတ်လုပ်သူ KidControl Dev.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://kid-control.com/2016/01/29/privacy-policy/
လက်မှတ် SHA1: A1:AC:7C:11:D2:2B:BB:F0:33:F9:64:6A:ED:86:64:8C:9A:CF:07:48
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Alexander Zheleznov
အဖွဲ့အစည်း (O): GPSme
နယ်မြေ (L): St.Petersburg
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): St.Petersburg
Family GPS tracker KidsControl APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ